Dhalinyarada Falastiin iyo Israa'iil oo ay technooloojiyadaha cusub kulmiyeen ayaa aaminsan inuu darbiga colaadeed ee u dhaxeeyey inuu dhawaan dumayo.
Dool oo mar soo noqday wasiir ku xigeen, muddo 35 sanno ahna wasaaradda arrimaha dibedda Soomaaliya ka mid ahaa.
Benjamiin Netnaiyaahuu oo sheegay haddii markale la doorto inuu sii wadayo deegaameynta Daanta Galbeed
Hadalka ka soo yeeray Benjaamiin Nataniyahu ayaa imanaya iyada oo seddex maalmood un ka harsan tahay doorashada guud ee Israa'iil ka dhaceyso.
Nin 73 jir ah oo ka yaabiyay dunida
Waxaa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu dheelo ciyaar kale.
Israa'iil: Maxkamad murashaxnimada ka mamnuucday nin siyaasaddiisu garabka midig ee fog tahay
Maxkamadda ugu sarraysa Israa'iil ayaa muruashaxnimada doorashada bisha soo socota ka hor istaagtay Michael Ben-Ari oo madax u ah xisbiga Jewish Power ama Awoodda Yuhuudda.
Booliska Israa'iil oo baaraya eeda ah 'in galmo lagu dhaafsaday shaqo garsoor'
Wiilka Ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo Facebook laga xannibay
Kooxda Xamaas oo madaafiic ku garaacday gudaha Israa'iil
Rabshado iyo dhacyo ayaa mar kale ka dhex qarxay Israa'iil iyo mintidiin Falastiiniyiin ah magaalada Qaza.
Israa'iil oo dishay Taliye Xamaas ka tirsan
Lix ruux oo Falastiiniyiin ah oo uu ku jiro sarkaal ururka Xamaas ka tirsan ayaa la dilay intii Israa'iil ay hawlgalka ka waday marinka Qaza, sida ay masuuliyiinta Falastiintu sheegeen.
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan bariga dhexe ayaa si adag uga digay xaaladda nabadda ee barige dhexe.
Wiil u dhashay Israa'iil oo "dhintay isagoo sawir iska qaadaya"
Wiilka hooyadiis ayaa sheegtay in wiilkeeda uu isku dayey inuu sawir iska qaado, balse uu gebiga ka dhacayey.
Xiriirka kubadda adduunka ayaa muddo 12 bilood ah shaqada laga hakiyay madaxa xiriirka kubadda cagta Falastiiniyiinta kaddib markii uu ugu baaqay tageerayaasha Falastiin inay dab qabadsiiyaan funaanadaha iyo sawirrada cayaaryahan Lionel Messi.
Milateriga Israa’iil ayaa sheegay inuu bartilmaameedsanayay goobo uu leeyahay Ururka Xamaas kaddib markii ay tobannaan sawaariikh ku ganeen Israa’iil.
Cahid Tamiimi oo ah gabar yar oo reer Falastiin ayaa xabsiga laga sii daayay kaddib markii 8 bilood ay ku xirnayd halkaasi, waxaana la xiray kaddib markii dharbaaxo iyo laad ay ku dhufatay askari Israa'iil agagaarka dhulka lahaysto ee Daanta galbeed.
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Israa'iil oo isu casilay sharci dhawaan la ansixiyay dartiis
Xildhibaan carab ah oo ka tirsan baarlamaanka Israa'iil ayaa xilka iska casilay kaddib markii uu ka carooday sharci ay meel mariyeen xubnaha baarlamaanka oo dhigaya in Israa'iil ay tahay qaran ay leeyihiin dadka Yuhuudda.
Iska horimaad dhexmaray dibadbaxayaal Falastiiniyiin ah iyo askarta Israa'iil
Saraakiisha caafimaadka magaalada Gaza ayaa waxa ay sheegeen in labo qof oo Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil.